ငွေကိုင်သူများ သမာဓိ အာမခံထား၍ အဖြေညှိ
ငွေကြေးကို တာဝန်ယူထိန်းသိမ်းရန် တာဝန်ပေးအပ်ခြင်းခံရသူကြောင့် ငွေကြေးပျောက်ဆုံးခြင်း၊ အလွဲသုံးစားပြုခံရခြင်းများ ဖြစ်ပွားသည့်အခါ နစ်နာဆုံးရှုံးမှုများကို ရင်းစားပြန်လည်ရရှိရန်အတွက် သမာဓိအာမခံကို ထားရှိနိုင်ပါသည်။
“သမာဓိ” ဆိုသည်မှာ တာဝန်တစ်ခုကို မဖောက်မယွင်း ထမ်းဆောင်ခြင်းပင် ဖြစ်သည်။ ငွေကြေးကိုင်ဆောင်သူ၏ ပျက်ကွက်မှု၊ ပေါ့လျော့မှု၊ လစ်ဟင်းမှု၊ လိမ်လည်ကောက်ကျစ်မှု၊ အကျင့်သိက္ခာပျက်ပြားမှု၊ မရိုးသားမှုတို့ကြောင့် လုပ်ငန်းပိုင်ရှင်များ၏ငွေကြေးဆုံးရှုံးမှုကို အကာအကွယ်ပေးပါသည်။
မည်သည့်လုပ်ငန်းအမျိုးအစားမဆို သမာဓိအာမခံကို ဝယ်ယူနိုင်သည်။
ပုဂ္ဂလိကဘဏ် - ၁.၀ %
ပုဂ္ဂလိကလုပ်ငန်း - ၂.၀ %
၁။ သမာဓိအာမခံထားရန် မည်သည့်စာရွက်စာတမ်းများ လိုအပ်ပါသလဲ။
ဖြေ။ ၁။ အဆိုပြုလွှာ
၂။ ငွေကိုင်သူ၏အမည်နှင့် မှတ်ပုံတင်မိတ္တူ
၄။ အကျင့်စာရိတ္တကောင်းမွန်ကြောင်း ရဲစခန်းထောက်ခံစာ
၅။ အကျင့်စာရိတ္တကောင်းမွန်ကြောင်း ကုမ္ပဏီ၏ထောက်ခံစာ
၂။ သမာဓိအာမခံသည် ဘယ်လိုဆုံးရှုံးမှုတွေကို အကာအကွယ်ပေးပါသလဲ။
ဖြေ။ ငွေကိုင်သူ၏ ပျက်ကွက်မှု၊ ပေါ့လျော့မှုကြောင့် ငွေကြေးလျော့နည်းခြင်း၊ ပျောက်ဆုံးခြင်း၊ အလွဲသုံးစားလုပ်ခြင်း၊ လိမ်လည်ကောက်ကျစ်မှု၊ အကျင့်သိက္ခာပျက်ပြားမှုတို့အတွက် အကာအကွယ်ပေးပါတယ်။
၃။ သမာဓိအာမခံတွင် အာမခံသက်တမ်း မည်မျှထားခွင့်ရှိပါသလဲ။
ဖြေ။ အာမခံသက်တမ်းမှာ (၁)နှစ်ဖြစ်ပါတယ်။
၄။ သမာဓိအာမခံအတွက် (၁) နှစ်စာ ပရီမီယံ ဘယ်လောက်ပေးသွင်းရမလဲ။
ဖြေ။ ၁။ ပုဂ္ဂလိကဘဏ်များ - 1.0 %
၂။ ပုဂ္ဂလိကပိုင်လုပ်ငန်း- 2.0 %
ပရီမီယံနှုန်းထား ပုဂ္ဂလိကဘဏ် – ၁.၀ % ပုဂ္ဂလိကလုပ်ငန်း – ၂.၀ % ပရီမီယံပေးဆောင်ပုံ အာမခံပရီမီယံအား တစ်ပေါင်းတည်း ပေးဆောင်ရမည်။ အာမခံသက်တမ်း တစ်နှစ်
1. What documents are needed to insure Fidelity?
Ans: i. Proposal
ii. Name and NRC copy of the person who handles cash.
iii. Employee card
iv. The police certificate
v. Recommendation letter from the company
2. What does the Fidelity Insurance cover?
Ans: Fidelity Insurance covers losses of cash arising from the dishonesty of employee.
3. How long does the policy period cover?
Ans: The policy period is one year for fidelity insurance.
4. How much is the premium rate for one year?
Ans: i. Private Banks – 1.0 %
ii. Private Enterprises – 2.0 %